Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.3.1 onodi
Onodi bụ banyere-eme inferences gị zaghachirinụ gị iche bi.
Iji ghọta ụdị njehie nke pụrụ ime mgbe inferring si zaghachirinụ na ibu onu, ka na-atụle ihe ndị edemede Digest ahịhịa nghoputa na-agbalị ikwu ihe ga-esi na ya pụta nke 1936 US president ntuli aka. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe karịrị afọ 75 gara aga, a debacle ka nwere otu ihe dị mkpa izi ndị nnyocha taa.
Edemede Digest bụ a na-ewu ewu general-mmasị magazine, na-amalite na 1920, ha malitere na-agba ọsọ ahịhịa ntuli ịkọ a ga esi Presidential Elections. Iji mee ka ndị a amụma, ha na-ballots ka nza nke ndị mmadụ, na mgbe ahụ nanị tally elu na ballots na e laghachi; edemede Digest ji nganga kọrọ na ballots ha natara na-abughi "dara nha, gbanwee, ma ọ kọrọ isi nrọ." Nke a na usoro n'ụzọ ziri ezi, e buru amụma na-eto eto nke ntuli aka na 1920, 1924, 1928 na 1932. na 1936, n'etiti Oké Ndakpọ, edemede Digest zipụrụ ballots na 10 nde mmadụ, ndi aha predominately si ekwentị directories na ụgbọala ndebanye ndia. Nke a bụ otú ha kọwara ha ụkpụrụ:
"Iyochapu si eji ire ụtọ-agba ọsọ igwe Nkea na ngwa nkenke nke Iri Afọ Atọ ahụmahụ iji belata guesswork ka ihe ndị bụ eziokwu. . . Ahụ .Nke izu 500 itienna kpụchara akpụcha si ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu nde adreesị a ụbọchị. Kwa ụbọchị, na a oké ụlọ elu karịa moto-ribboned Fourth Avenue, na New York, 400 ọrụ deftly slide a nde mkpụrụ ego e biri ebi okwu-ezu iji kpuchie iri anọ n'obodo blocks-n'ime kwara ekpuchikwa [sic]. Awa ọ bụla, na iyochapu onwe Post Office Substation, atọ ekwu maka ozi metering ígwè ọrụ a kara akara na zọọ na-acha ọcha oblongs; ọkà nzi ozi ọrụ flipped ha n'ime bulging mailsacks; nsoro Digest gwongworo kwofere ha ka ha kwuo mail-ụgbọ oloko. . . Izu na-abịa, akpa-aza, si iri a nde ga-amalite na-abata tide nke n'ọkpụite ballots, na-Mmaji Atọ-enyocha, kwupụtara, ise ugboro cross-nkewa na totaled. Mgbe ikpeazụ ọgụgụ e totted na ndenye, ma ọ bụrụ na n'oge gara aga bụ a criterion, na mba ga-amarakwa na n'ime akụkụ dị nta nke 1 percent ahụ n'ezie na-ewu ewu votu nke iri anọ nde [Ntuli]. "(August 22, 1936)
The Digest si fetishization nke size bụ n'otu ntabi akpakwa ọ bụla "nnukwu data" na-eme nchọpụta taa. Nke 10 nde ballots na-ekesa, ihe dị ịtụnanya gụọkwa 2.4 nde ballots e laghachi-nke ahụ bụ Olee ihe enyemaka 1,000 karịa oge a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ntuli aka. Ndị a gụọkwa 2.4 nde zaghachirinụ mkpebi doro anya: edemede Digest buru amụma na ịma ya aka Alf Landon na-aga imeri incumbent Franklin Roosevelt. Ma, n'ezie, dị nnọọ iche mere. Roosevelt meriri Landon na a Mbuzo. Olee otú ihe ndị edemede Digest aga-ezighị ezi na nke ukwuu data? Oge anyị a nghọta nke ụfọdụ na-eme ka ndị edemede Digest si njehie doro anya na-enyere anyị zere ime ụdị njehie n'ọdịnihu.
-Eche echiche n'ụzọ doro anya banyere ụfọdụ chọrọ ka anyị na-atụle anọ dị iche iche iche iche nke ndị (ọgụgụ 3.1). The ìgwè mbụ nke ndị bụ lekwasịrị bi; nke a bụ otu na research akowa dị ka ndị bi na nke mmasị. Na ihe banyere edemede Digest lekwasịrị bi na ama Ntuli Aka na 1936 president ntuli aka. Mgbe na-ekpebi na a lekwasịrị bi, a na-eme nchọpụta ọzọ kwesịrị ịzụlite a ndepụta nke ndị na ike ga-eji na-atụ. Ndepụta a na-akpọ ụfọdụ etiti ma ndị bi na nlele etiti na-akpọ eku bi. Na ihe banyere edemede Digest eku bi bụ 10 nde mmadụ ndi aha bịara predominately si ekwentị directories na ụgbọala ndebanye ndia. -Kwesịrị iche na ndị bi na eku bi ga-abụ kpọmkwem otu, ma na omume na nke a bụ mgbe ọ bụghị ikpe. Iche n'etiti iche bi na etiti bi na-akpọ mkpuchi njehie. Mkpuchi njehie adịghị, site n'onwe ya ekwe nkwa nsogbu. Ma, ọ bụrụ na ndị mmadụ na etiti bi na ya n'usoro dị iche iche si ndị mmadụ adịghị n'ime eku bi a ga-enwe mkpuchi echiche ọjọọ. Mkpuchi njehie ahụ bụ nke mbụ nke isi flaws na-ede akwụkwọ Digest nghoputa. Ha chọrọ ịmụ banyere Ntuli Aka-na ha lekwasịrị bi-ma ha rụrụ ụfọdụ etiti predominately si ekwentị directories na ụgbọala registries, na isi mmalite na n'elu-anọchi anya ndị bara ọgaranya karị America na ndị ọzọ yiri ka na-akwado Alf Landon (cheta na abụọ teknụzụ ndị a, nke bụ ọsọ taa, ndị dịtụ ọhụrụ n'oge na na US bụ ndị nọ n'etiti Oké Ndakpọ).
Chepụta 3.1: onodi njehie.
Mgbe akọwapụta eku bi, nzọụkwụ ọzọ bụ maka a na-eme nchọpụta iji họrọ sample bi; Ndị a bụ ndị na-eme nchọpụta ga-agbali iji ajụjụ ọnụ. Ọ bụrụ na ndị sample nwere dị iche iche e ji mara karịa etiti bi, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịme ụfọdụ njehie. Nke a bụ ụdị nke njehie quantified na-njikọ nke njehie na-emekarị esokwa atụmatụ. Na ihe banyere ndị edemede Digest fiasco, e nwere n'ezie ọ dịghị sample; ha mere iji kpọtụrụ onye ọ bụla nọ etiti bi. Ọ bụ ezie na e nweghị ụfọdụ njehie, e nwere doro anya na ka njehie. Nke a doo anyị anya na n'akụkụ peeji nke njehie na na-Elezie-kọrọ na atụmatụ e mere si nnyocha ndị e mere na-na-misleadingly obere; ha adịghị agụnye niile na isi mmalite nke bụ njehie.
N'ikpeazụ, a na-eme nchọpụta agbali ajụjụ ọnụ onye ọ bụla nọ sample bi. Ndị mmadụ na-ọma gbara ajụjụ ọnụ na-akpọ ndị zaghachirinụ. N'eziokwu, obu ihe sample bi na zaghachirinụ ga-abụ kpọmkwem otu, ma na omume e nwere ndị na-abụghị omume. Ya bụ, ndị na-ahọrọ na sample ajụ ịga. Ọ bụrụ na ndị na-anabata ya dị iche iche n'ebe ndị na-ekweghị, mgbe ahụ, e nwere ike ịbụ ndị na-abụghị omume echiche ọjọọ. Non-omume echiche ọjọọ bụ nke abụọ isi nsogbu na-ede akwụkwọ Digest nghoputa. Naanị 24% nke ndị na-natara a vootu mere, na ya tụgharịa na ndị na-akwado Landon yikarịrị ka ha nabata ya.
Wezụga nanị ịbụ ihe nlereanya ka ewebata echiche nke onodi, ndị edemede Digest nghoputa bụ ihe na-atụkarị n'aro ilu, cautioning na-eme nnyocha banyere ihe ize ndụ nke haphazard nlele. O di nwute na, M na-eche na ihe na ọtụtụ ndị na-abịaru n'akụkọ a bụ na-ezighị ezi. Kacha nkịtị omume nke akụkọ bụ na-eme nnyocha na-apụghị ịmụta ihe ọ bụla si na-abụghị nke puru omume samples (ie, samples-enweghị iwu siri ike nke puru omume ndị dabeere na iwu maka ahọpụta sonyere). Ma, dị ka m na-egosi mgbe e mesịrị ke ibuot emi, nke ahụ abụghị nnọọ ziri ezi. Kama nke ahụ, m na-eche na e nwere n'ezie abụọ omume ka akụkọ a; omume ọma ndị dị ka ezi taa dị ka ha nọ 1936. mbụ, a nnukwu ego nke haphazardly anakọtara data ga-ekwe nkwa a mma atụmatụ e mere. Nke abụọ, na-eme nnyocha kwesịrị akaụntụ maka otú ha data e anakọtara mgbe ha na-eme atụmatụ e mere site na ya. Ndị ọzọ okwu, n'ihi na data collection usoro na-ede akwụkwọ Digest nghoputa nwayọọ skewed n'ebe ụfọdụ zaghachirinụ, na-eme nnyocha mkpa na-eji a ihe mgbagwoju ọnu usoro na igwe ụfọdụ ndị zaghachirinụ karịrị ndị ọzọ. Mgbe e mesịrị ke ibuot emi, m ga-egosi gị otu ndị dị otú ahụ weighting usoro-post-stratification-na nwere ike ị na-eme ka mma atụmatụ e mere na-abụghị nke puru omume samples.